Himalaya Dainik » बलिउडका एक जमानाका हिट १० नायिका, अहिले कहाँ भए गायब !
बलिउडका एक जमानाका हिट १० नायिका, अहिले कहाँ भए गायब !
कलाकारिता क्षेत्रमा कहिल्य चर्चा हुन्छ कहिले बिवाद हुन्छ । बलिउडका केही सेलिब्रिटीले भारतमा लामो यात्रा तय गरिसकेका छन् । जो चर्चित हुन त भए तर अहिले बलिउडमा देखिन छाेडेका छन् ।
यस्ता १० बलिउड नायिका, जाे अहिले फिल्मि क्षेत्रबाट निकै टाढा भए
सुन्दर अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्रीले वर्षौं अघि नै फिल्मबाट निकै टाढा रहेकि छिन् । दामिनी, हिरो, अल्ला राखा, विजय, शहंशाह, घायल, घर हो तो जस्ता थुप्रै सुपरहिट फिल्ममा अभिनय गरेपछि अन्तिम पटक उनी सन् १९९६ मा स्वामी विवेकानन्द फिल्ममा देखिएकी थिइन् ।
विवाह पछि उनी अमेरिकामा सेटल भइन् ।
८०–९० को दशककी बोल्ड नायिका किमी कटकरले टारजन र हम जस्ता हिट फिल्मबाट चर्चा बटुलिन् । विवाहपछि उनले फिल्म खेल्न छोडिदिइन् । उनको विवाह फोटोग्राफर तर फिल्म निर्माता शान्तनु शोरेसँग भएको छ । आजकाल उनी अष्ट्रेलियामा बस्छिन् ।
उनी गुगल इन्डियामा इन्डष्ट्रि हेडको रुपमा काम गरिरहेकी छिन् । फिल्म ‘पापा कहते हे’ देखि घर–घरमा आफ्नो मायालु अनुहारका लागि चर्चित मयूरी कांगोले लामो समय अघि नै फिल्मबाट टाढा भइसकेकी छिन् ।मयुरीले मार्केटिङ र फाइनेन्समा न्यूयोर्क युनिभर्सिटीबाट एमबीए गरेकी थिइन् ।
अनु अग्रवालले महेश भट्टको फिल्म आशिकीबाट चर्चा हासिल गरेकी थिइन् । उनलाई पछिल्लो पटक सन् १९९६ मा अन स्क्रिन देखिएको थियो । एक दुर्घ टनापछि उनले फिल्मी दुनियाँलाई सदाका लागि त्यागिन् । उनी विहारको एक योग विश्वविद्यालयमा योगा सिकाउँछिन् ।
सन् १९९८ मा फिल्म ‘करिब’ बाट बलिउड डेब्यू गरेर नेहा रातारात स्टार बनेकी थिइन् । ऋतिक रोशनसँग उनको फिल्म फिजामा पनि उनलाई धेरैले याद गरे । नायक मनोज बाजपेयीसँग विवाह गरेपछि उनले निकै छिटो फिल्म छोडिन् । उनकी एक छोरी छिन् ।
जो जीता वही सिंकन्दरबाट लाइमलाइटमा आएकी आयशा जुल्का पनि निकै अघि फिल्ममा देखिन छोडिन् । आज उनी एक बिजनेस वुमन भइसकेकी छिन् र श्रीमन्सँग हातमा हात मिलाएर आफ्नो जिम्मेवारी निभाइरहेकी छिन् । उनी श्रीमानसँग निर्माण व्यावसाय, स्पा जस्ता व्यापार सम्हालिरहेकी छिन् ।
सन् १९८७ मा रिलिज भएको घरका चिरागबाट चर्चामा आएकी निलम कोठारीले सन् २००१ सम्म फिल्ममा काम गरिन् । उनले टिभी अभिनेता समिर सोनीसँग विवाह गरेकी थिइन् । अब निलम मुम्बईमा आफ्नो गहनाको शोरुम चलाउँछिन् । आज उनी पर्दामा त देखिन्नन् ।
सुपरहिट फिल्म मेने प्यार कियाबाट बलिउड डेब्यू गर्ने नायिका भाग्यश्री हिन्दी फिल्मबाट गायब भइसकेकी छिन् । यद्यपि, उनी क्षेत्रीय स्तरको फिल्ममा सक्रिय छिन् । हिन्दी सिनेमामा उनलाई लामो समयदेखि देखिएको छैनन ।